"34 Ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin’ny tany Aho; tsy tonga hitondra fiadanana Aho, fa sabatra. 35 Fa tonga Aho hampifandrafy olona amin’ny rainy, ary ny zanakavavy amin’ny reniny, ary ny vinantovavy amin’ny rafozanivavy; 36 ary ny ankohonan’ny olona ihany no fahavalony. 37 Izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany Ahy dia tsy miendrika ho Ahy, ary izay tia ny zanani-lahy na ny zanani-vavy mihoatra noho ny fitiavany Ahy dia tsy miendrika ho Ahy. 38 Ary izay tsy mitondra ny hazo fijaliany ka tsy manaraka Ahy dia tsy miendrika ho Ahy. 39 Izay mamonjy ny ainy no hamery azy; ary izay mamery ny ainy noho ny amiko dia hahazo azy. 40 Izay mandray anareo dia mandray Ahy; ary izay mandray Ahy dia mandray Izay naniraka Ahy. 41 Izay mandray mpaminany, satria mpaminany izy, dia handray ny valim-pitian’ny mpaminany; ary izay mandray olona marina, satria olona marina izy, dia handray ny valim-pitian’ny olona marina. 42 Ary na zovy na zovy no manome rano mangatsiaka na dia eran’ny kapoaka ihany aza hosotroin’ny anankiray amin’ireo madinika ireo, satria mpianatra izy, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany." Matio 10:34-42
Tolona ny fiainana (34-39). Mitohy ny fametrahan’i Jesosy Kristy fitsipi-dalao amin’ny fanarahana Azy. Tsoriny eto fa tsy mitondra fiadanana izy fa ady (34) ary hisy tokoa ny fifandrafiana ao anatin’ny ankohonana arakin’ny faminaniana ao amin’ny Mika 7:6. Ekena fa ny fara tanjon’ny Filazantsara dia ny fiadanana (Jaona 14:27), mandra-pahatonga izany fiadanana izany anefa dia tsy maintsy mandalo ady sy tolona. Ny fanarahana an’i Kristy dia matetika mitarika disadisa eo anivon’ny ankohonana. Tian’Andriamanitra hanana fanolorantena tanteraka sy feno isika mba hahaizantsika mihoatra ny sakana rehetra. Isan’izany ny sakana eo anivon’ny ankohonana. Ento ary ny hazofijaliana (38), fa izany no antoka hahazoana ilay valimpitia lehibe indrindra dia ny fiainana mandrakizay.
Iza re no ampiantranoako? (40-42) Tsara sy mahafinaritra tokoa ny mampiantrano havana, namana, sakaiza mahatoky sy akaikin’ny fo satria mampiseho firahalahina sy mahatsara ny fifankatiavana izany (Salamo 133). Ahoana kosa ny amin’ireo mpanompon’Andriamanitra? (41) Iraka solon’i Kristy izy ireny (2 Korintianina 5:20), mpitondra ny hafatry ny Filazantsara ka izay mandray azy ireny dia mandray ny Tompo ary ho an’izay mandray an’ny Tompo dia mitoetra eo aminy ny fiadanana. Ary ny amin’ny ireo madiniky ny Tompo? (42) Tsy iza ireo fa ireo izay avy manolotena ka manaiky am-panetrentena an’i Kristy ho mpianany ary tsy manana iankinana hafa afa tsy amin’ny Tompo irery ihany. Mety ho ireo olona mahantra eo amin’ny fiarahamonina koa izany. Ireo izay heverin’ny manodidina ho tsinontsinona, ireny koa no tian’ny Tompo ampiantranointsika.